Noorweey oo qoraal aan nuxur badan laheyn ka soo saartay booqashaddii Soomaaliya | Somaliska
Siyaasada / Socdaalka
Iyadoo maalmo ka hor wasiirkii arrimaha dibadda Noorweey Børge Brende booqasho ku tagay Soomaaliya, kulana la qaatay madaxda uga sareeysa dalka ayaa hadal qoraal ah oo laga soo saaray booqashadaasi lugu sheegay in Noorweey ay muddo dheer ka qeyb qaadatay dadaladii lugu doonayey nabadeeynta Soomaaliya.
Hase ahaatee ay adag tahay sida horumar looga sameeyo dal ay heykalkiisa dowladnimo bur bureen. Qoraalka ayaa sidoo kale lugu sheegay in ay muhiim tahay in xaaladahaas adag iyadoo lala imanayo da daalo iyo fir fircoono si looga baxo dhibaatada daba dheeraatay.
Qoraalka ay dowladda Noorweey ka soo saartay socdaalka wasiirkeeda ayaa dhinaca kale lugu yiri dowladdda Farmaajo ee cusub waxaa ka go’an in ay ammaanka soo celiso da daal dheerna ay ugu jirto hirgelinta xasilooni ka islaaxda Soomaaliya. Arrimaha ay ka mid yihiin ammaanka, ciidanka Amisom, isbadal siyaasadeed iyo la dagaalkan kooxda Alshabab ayaa waxeey ka mid yihiin waxyaabihii ay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda Noorweey iyo madaxda soomaalida sida lugu sheegay qoraalkaas.
Ugu dambeyntiina Noorweey waxaa ay sheegtay ama qoraalkaas lugu xusay in xukuumadda Oslo ay qeyb ka tahay mashruucyo dalka laga fuliyey gaar ahaan caasimadda, iyo xirriiro wada shaqeyn oo sy la leedahay qeybaha kala duwan ee soomaalida. Waa markii ugu horeeysay oo wasiir arrimo dibadeed caga dhigta Soomaaliya. Noorweeyna waxaa ay ka mid tahaya dalalka ku yaala Yurubta waqooyi oo ay soomaali badan dagan tahay, halkaasoo ay qaarkood dhinaca sharciga dhibaato ka heeysato, tiiyo ay jirtana dalkaasi lugu qaatay carruuro badan oo soomaaliyeed.